Pane kukakavara kuMiddle East - Iyo Nyika Kurume
musha » Noticias » Press Notes » Panyaya yeku Middle East
MsGysV Latin America inoratidza kushushikana nemamiriro ezvinhu echisimba akaunzwa pakati pevaPalestine nevaIsrael
Nyika isina Hondo uye isina Mhirizhonga Latin America, nhengo yeNew Universalist Humanist, ine zvinangwa zvekubatsira kupedzisa marudzi ese ehondo, hondo, uye mukuzadzikisa nyika isina mhirizhonga kana kusarura chero mhando, inotaura kushushikana kwakadzama nemamiriro emhirizhonga akaunzwa pakati pevaPalestine nevaIsrael, ayo anototora vanhu vanopfuura mazana maviri kufa. Inoratidza zvakare kubatana kwayo nevanourayiwa vakaurayiwa vezviitiko izvi, avo vakakuvara, uye mhuri dzevose, vese maPalestine neveIsrael.
Iri sangano revanhu rinotsigira zvakasimba kuti hapana chinoruramisa mamiriro emhirizhonga senge ari kuwanikwa munharaunda uye kuti hapana chinhu chakakosha kupfuura hupenyu hwevanhu uye kodzero dzayo, zvisinei nenyika, dzinza, murume kana mukadzi, chitendero kana dzidziso yezvematongerwo enyika.
Pakati pekufa kune vakadzi vazhinji nevana, izvo zvinoita kuti mamiriro ezvinhu anosiririsa ekuitira vanhu ari kuitika munzvimbo iyi ave akaipisisa uye iri iro rinomufambisa zvakanyanya kutaura chirevo ichi sekushora kwezviitiko zvinotyisa izvo zvinofanirwa kukurumidza kupera kuitira kudzivirira nzufu zhinji dzevanhu vasina mhosva.
Nyika isina hondo uye isina mhirizhonga Latin America inokurudzira United Nations Security Council kuti itore danho panyaya iyi uye kumisa mhosva dziri kuitirwa vanhu nekuranga kuburikidza neInternational Criminal Court makwikwi aya ari kunyanya kukanganiswa nevanhu. Hazvigamuchirwe kuti nharaunda yepasi rose inova yakabatana mukuuraya uku uye ikatadza zvakare pabasa rayo kuchengetedza runyararo nekuchengeteka kwevanhu venyika.
Izvo zvinosheedzerawo hana yemunhu yemapato ari kurwa kuti amise kuwedzera kwechisimba kuri kuva nemigumisiro inosiririsa kune vese vanhu vePalestine neIsrael, uye izvo zvinogona kutonyanya kutonyanya kukunda nguva dzakaipisisa dzakasangana muna 2014.
Iye anoomerera kuti nzira chete yekumisa iyi mhirizhonga ndeyekuti Israeri ipedze basa risiri pamutemo rePalestine. Aya ndiwo mavambo emakakatanwa ese, anofarirwa nehunhu hwekupokana hwenyika dzinotamba mubhizimusi rezvombo, pakati pevamwe, iyo US Nharaunda yepasi rose haifanire kunge yakabatana mukurwisa uku. Izvo ndezvekudzivirira kodzero dzevanhu dzekutanga dzekona uye dzakarwiswa zvachose vanhu.
Matunhu anotorwa neIsrael semisha isiri pamutemo yakarambwa neUN inofanirwa kupindirwa nekudzorwa kuitira kuti kuvengana, rusarura uye marudzi ese erusarura kumativi ese ari maviri amire. Zvakare kubvisa kumanikidzwa kuenda kune dzimwe nyika, rusaruraganda pamwe nemarudzi ese ekuratidzwa kwekukunda kwakaitwa nevaIsraeri vachipesana nevanhu vePalestine, avo vanowanzoonekwa sevapoteri munyika yavo.
Nenzira imwecheteyo, inoshora zviito zvePalestine Islamic yekupokana neHamas kurwisa Israeri, nekuti hapana mhando yemhirizhonga ine zvombo inoruramiswa chero zvakadaro. Masangano epasi rose ekodzero dzevanhu anofanirwa kumisikidza Chibvumirano cheChina cheGeneva uye Chirevo Chemunhu Wekodzero Dzevanhu. Pamusoro pezvo, vese vanhu vanofanirwa kuzivisa chibvumirano, vagare pasi kuti vataurirane mhinduro isiri yechisimba padambudziko iri, voshanda kuti vawane chibvumirano chakasimba chinopedza kurwira kweropa uku pakati penyika mbiri dzehanzvadzi.
Nyika isina Hondo neMhirizhonga Latin America inokurudzira ese masangano evagari kutenderera pasirese anoshandira kodzero dzevanhu, varwiri vehondo pamwe neanopokana-nehondo kuita chikonzero chimwe uye nesimba kushora zviitiko izvi zvinosuwisa zvinokanganisa kodzero yemunhu yehupenyu, kuchengetedzeka uye kugara mukati nharaunda isina mhirizhonga sezvakataurwa mubumbiro remitemo yenyika kuti munhu wese akavimbisa kuremekedza.
Chekupedzisira, inodaidzira kune vese vanhu vanoziva venyika ino, vatongi, vamiriri veparamende, vadzidzisi, vatungamiriri vezvitendero zvese zvitendero, vezvematongerwo enyika vezvematongerwo enyika, vadzidzi vezvikamu zvese, kuti vazvipire mukuda kwechikonzero ichi, kugumisa zvachose denda rehondo, iyo kunyangwe mumireniyumu itsva iyi iri kuramba ichinyadzisa zvikuru munhoroondo yevanhu, iyo yakaunza kutambura kwakanyanya kuvanhu.
Vanyoreri: Nyika isina hondo Chile, Nyika isina hondo Argentina, Nyika isina hondo Peru, Nyika isina hondo Ecuador, Nyika isina hondo Colombia, Nyika isina hondo Panama, Nyika isina hondo Costa Rica, Nyika isina hondo Honduras
Tinotenda Pressenza International Press Agency nechinyorwa chakaburitswa: Pane Kukakavara kuMiddle East.
1 taura nezve "Nezve kurwisana kuMiddle East"
Pingback: Pane kukakavara kuMiddle East - Latam Legal